An excellent handicap-friendly Hawaii event | Cultural Travel News
Home » Akụkọ Mgbasa Ozi Omenala » Ezigbo ihe omume Hawaii nwere nkwarụ
Ezigbo ihe omume Hawaii nwere nkwarụ
Agabeghị m ajọ lūau, mana nke ọ bụla dị iche. Mgbe m na-achọ nkwarụ-enyi na enyi, ikuku luau nwere ọnọdụ dị egwu, ahọrọ m Ka Moana Lūau, nke dị na aha osimiri Life Life Park Hawaii na Oahu mara mma n'akụkụ windward.
Onye edemede dere luau a siri ike 10 n’ime 10 dị ka ihe omume nwere nkwarụ - chọpụta ihe kpatara ya.
Otu nwoke na-ejegharị na-eme ka ọ bụ onye na-akpa nkwu bụ n'ezie onye njikwa na-eme ka ụfọdụ ndị ahịa nwere ahụmịhe kachasị mma.
Imeri nsogbu nke njem.
Ihe ndị m chọrọ izere bụ lūaus n'elu ụlọ nke simenti na ndị nwere tebụl na-acha ọcha na-ada na aja aja nke dị sentimita itoolu nke ga-eme ka oche nkwagharị na-agagharị agagharị. Nke a gosipụtara na ọ bụ ihe omume nnabata enyi na enyi nke Hawaii.
Ka Moana Lūau dị n'akụkụ ebe ọwụwa anyanwụ n'akụkụ dịpụrụ adịpụ nke Oahu. Ọ dị na lush, florid nke agwaetiti ahụ. N'azụ isi ihe bụ egwu Rabbit Island na turquoise Polynesian mmiri. Ebe a bụ ala ahịhịa jupụtara, ahịhịa na-enweghị mgbochi, dịkwa mfe ịnyagharị na oche ndị ngwọrọ ma ọ bụ mgbe ị na-agagharị na nwa ọhụrụ.
Tebụl kpuchiri ya na uwe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, jiri mmesapụ aka gbapụ iche COVID-19 nchekwa, ma dikwa n’elu ugwu na-adi ike nke na-eche ebe sara mbara ihu. N'ihi na mbara igwe ahụ, arụmọrụ ndị ahụ nwere ike ịnabata ọtụtụ tebụl maka nlele nso. Onye ọ bụla nọ na-etu ọnụ n'ụzọ doro anya, ndị na-agba egwú ike ha, na abụ olu ụtọ. Ndị Tahitian na-agba egwu, ọkacha mmasị m, mara mma.